ပျံ့ လွင့် နေ သော တေး နှင့် က ဗျာ ၀ိ ညာ ဉ်: May 2009
အမေ့ဆီ လွှတ်တင်လိုက်သော ကျွန်တော့် ဆုတောင်း
မွှေးပျံ့လွန်းတဲ့ တနင်္လာနေ့မှာအော်သံများက စည်းရိုးအပြည့်ရိုက်ခတ်သွားတယ်သံတိုင်များက လှုပ်ခတ်သွားတယ်နံရံများက တုန်ဟည်းသွားတယ်..မြို့ရိုးပါ ကျိုးပျက်တော့မလားခေါ်သံတွေအတိုင်းသားကြားတယ်အော်သံတွေ အားပါတယ်..အမေအမေ ပျော်နေမလား . . . ဒါမှမဟုတ်အမေငိုနေမလား. . . အားမပျော့နဲ့အားမလျော့နဲ့. . .အမေ့ရဲ့လက်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုတေ့ဆက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လေးဆီ..မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ဦးတည်လာပြီဧရာဝတီ..မှ..သံလွင်...သံလွင် မှ ဒုဋ္ဌ၀တီခင်ဗျားတို့အားနဲ့ ထကြွပါ..ထောင်ထား ခြားနားမှုနဲ့ လူးလွန့်ပါအမေမျှော်ကြည့်နေမလားသူတို့ရပ်ကြည့်နေမလားအမေ..အမေ.. (((((အမေ)))))ကျန်းမာကြံ့ခိုင်လွတ်မြောက်ပါစေ ။ ။
ထိန်းထားတဲ့ကြားက ထွက်ကျလာတဲ့ စာသားတချို့အဓိပ္ပာယ်လွှဲယူ နေ့ရက်တချို့ ၀ှက်ထားတယ်နမူနာကို ကဗျာလို ခင်းထားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရုပ်ဖျက်ထားတယ်ချို့တဲ့မှုကို ဆေးသုတ်ထားတယ်လားရာဟာ ပြန်လမ်းမရှိဘူးအလှကို ဖန်ဆင်းမထားဘူးခေါ်နေသံ မကြားတော့ဘူးပုံရိပ်ယောင်များ တဖျပ်ဖျပ်လပ်လင်းနေတဲ့ မီးက မှေးမှိန်မှိတ်သွားတယ်ကံကြမ္မာကို ကံကြမ္မာနဲ့ ကစားတယ်ဘ၀တွေက ကွင်းထဲမှာဗျူဟာက ဗျူဟာမြောက်စွာတွန်းကန်သွားတယ်ဆွဲငင်သွားတယ်နေရာတကာ ယူကျုံးမရသွေးခုန်နှုံး တဒိတ်ဒိတ်တိုးလို့ခြေလှမ်းတွေ ကျိတ်ကျိတ်တိုးတယ်လမ်းတွေမှာနေရာထိုင်ခင်းတွေမှာရပ်ကျော်ရွာကျော်ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာလွင့်နေတဲ့အလံမှာ ကြယ်ရောင်က ၀င်းလက်တောက်ပတစ်သက်စာအလွဲကို ဖက်တွယ်ထားသလိုအရည်မရအဖတ်မရပစ်မှတ်က ဇာတာဖွဲ့လို့ဒိုင်ယာရီထဲရက်စွဲများထဲလက်ရေးများနဲ့ နေနည်းထိုင်နည်း၊လက်ရေးများနဲ့ ဟောနည်းပြောနည်းခေတ်ကြီးထဲတရားတွေ မတရားအနိုင်ရသွားတယ်အပြုခံနည်းနည်းမှ ပြုစုမှုများများလောကဓမ္မတာ တစ်နေ့တစ်လွှာ ကွာကျယားနေတဲ့ကျောကို လက်ပြန်ကုတ်ရအခန်းကျဉ်းထဲ ဝေစားမျှစားပူလောင်မှုထဲဒုက္ခ အရောင်ဆိုးမထားဘူးလူနေမှုထဲ ကဗျာနေမှုများများတစ်နေ့စာတစ်နေ့ကျက်သလိုတစ်နေ့ ကဗျာ တစ်နေ့ မထွက်တာ သဘာဝအရေးကျဲတဲ့အကြောင်းမပြောခင်အရည်ကျဲသူတွေအကြောင်းပြောမယ်ကမ္ဘာပြားလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင် မစိမ်းလန်းဘူးတိမ်ထူတယ်နေပူတယ်အသက်ရှုကြပ်တယ်ချောင်းဆိုးတိုင်း သွေးပါတယ်နာမကျန်းမှုက ဆေးလိပ်ခိုးထဲအတွေးတွေ ကန်သွင်းတယ်ပန်းမပွင့်သမျှ ပျံသန်းမနေကြနဲ့ပျားပိတုန်းတို့ညောင်းညာမှုထဲ အနှိပ်သည်တို့ ကြီးစိုးတယ်ထို့ကြောင့်ကဗျာရေးမှု ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။ ။ Posted by
သစ်ကိုင်းကူးသလို တစ်ကိုင်းပြီးတစ်ကိုင်းကူးတစ်ချက်ခြစ်တစ်ချက်တောက်မီးခတ်ကျောက်လိုထ ပွင့်တဲ့ တရားခင်ဗျားနေရာမှန် ပြန်သွားလိုက်စမ်းပါ။ရာသီဥတုပူတယ်ကမ္ဘာမြေ ရေဆာနေတယ်ပက်ကြားအက်ထဲ ကွဲအက်လာတဲ့ လက်တွေအရိပ်သုံးပါးနေပြောက်ထိုးခင်ဗျားနေရာမှန် ပြန်သွားလိုက်စမ်းပါ။ညောင်းညာမှုတွေ ပျော်ဝင်သွားတဲ့လက်ဆစ်ချိုးသံထဲအရုဏ်မတက်မီ လင်းလက်သွားတဲ့ပစ်စလက်ခတ်တွေရှာလိုက်တိုင်း ပျောက်သွားတဲ့ဝေဒနာကျားလိုက်သလို အသက်ရှုသံမှတွယ်ငြိစိတ်ခင်ဗျားနေရာမှန် ပြန်သွားလိုက်စမ်းပါ။ရောက်ရှိလာမယ့် အသိများနောက်အမှောင်အလင်းများ သွယ်လျမှု အခြေအနေစကားလုံးများ အနုလုံပဋိလုံခန္ဓာယိုင်နဲ့နဲ့ရပ်တည်မှုနဲ့ တစ်ဖက်သတ်အတွေးအခေါ်များလျှာဖျားပေါ်မှ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုသင်တို့ . . .သင်တို့နေရာမှန်ကို ပြန်သွားလိုက်ကြစမ်းပါ။ ။ Posted by
ကျွန်တော် မှ မေမေ့ဆီသို့
လက်တစ်ဆုပ်စာဖြစ်ဖြစ် ကြက်တစ်ဝပ်စာဖြစ်ဖြစ်အပတ်တကုတ်လေး ချစ်ပါရစေမေမေ။ဒဏ္ဍာရီလာ အမေကဗျာများသားချော့တေးများ ဝေးရာရင်ခွင်တစ်စုံ လှစ်ဟာတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာမေမေ……..မေ….မေ လို့ဟစ်ခေါ်နေမိတယ်ပြန်မလာတဲ့ အသံများဆီနည်းအမျိုးမျိုး ကူးခတ်နေမိတယ်ခဏဖြစ်ဖြစ် မိန်းမောနေမိတယ်မေမေအာသီသများ ကင်းရာမေတ္တာတရားမှာ (ဘယ်တော့မှ) လှိုဏ်သံမပါဘူးနှစ်မြုပ်ထားတဲ့ ပရိစ္ဆေဒအောက်စွန့်ခြင်းကြီး(၅)ပါး စွန့်ကြဲခဲ့သူတစ်ယောက်ဘယ်လောက်များ ရှိုက်ငိုနေလိမ့်မလဲသားတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမှာစီးဆင်းသွားတဲ့ စစ်သည်တော်သီချင်းမနက်ဖြန်တွေ အိပ်မက် မမက်တော့တဲ့အခါသံဝေဂတွေ ထမ်းပိုးပြီး သားပြန်လာခဲ့မယ်နေညိုချိန်တွေ သိပ်ချိုတယ် မေမေ. . .လောကပါလတရား မှောင်စပျိုးစဉ်အမေ့ကြယ်လေး လက်တစ်ပစ်စာအမေ့အတွက် ကြွေပချင်သေးရဲ့စုန်ရေတွေ စုန်ပါစေဆန်ရေတွေ ဆန်ပါစေကျွန်တော် မြစ်တစ်စင်းလို အမေ့ရင်ခွင်ကို စီးမယ်ကျွန်တော်မြစ်တစ်စင်းလို့ အမေ့ဆီကို ဆန်ခဲ့ပါမယ်နားလည်ပါပြီ မေမေနားလည်ပါပြီဦးညွှတ်ခြင်းရဲ့ အဆုံးနဲ့ ကွေ့ကွင်းခြင်းသက်သေထူဖို့ကျွန်တော်မြစ်တစ်စင်းလို့ အမေ့ခြေရင်ဝပ်ဆင်းမယ်ပင်လယ်လိုငြိမ်သက်နေတဲ့ မေမေကျန်းမာပါစေပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။ Posted by
ပင်လယ်၊ ကျွန်တော်၊ စီးဆင်းတယ်
တစ်ဖက်မှာ ထင်နေတဲ့ အရိပ်များပြောင်းပြန်ဖြိုချထားတဲ့ တဲအိုပျက်ထဲဆက်စပ်မဲ့စကားလုံးတွေ တွဲဆက်အတိတ်တွေရေစီးကြောင်းတွေပင်လယ်ထဲ မြစ်တွေ စီးဆင်းသွားတယ်သရုပ်မှန်တီးတဲ့ ဂီတမနက်ဖြန် ညစာ မှန်ပါ့မလားအဝေးက အော်သံအဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းအဝေးမြင်ကွင်း“အဝေးက ဧည့်ခန်း”ဝေးကွာခြင်းကို သီးခြားဖော်ပြထားတယ်အရိပ်အတိတ်နိမိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြောရန်ပြောင်းပြန် လုပ်စရာမလိုဒီနေ့စားတဲ့ ညစာကယေရှုခရစ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ညစာပင်လယ်တွေ ဘယ်ကို စီးဆင်းသွားဒါကိုပဲစဉ်းစားနေမိတာစကားလုံးတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ သုံးစွဲအက်ကြောင်းထပ်နေတာ သံသရာမိနေတဲ့ ကာရန်မိနေတဲ့ ငါးမိနေတဲ့ ကောင်မလေးမိနေတဲ့ တစ်ခုခုတွေ့လားဖြာထွက်နေတာကဗျာဆိုတာပျံသန်းသွားတာလမ်းလျှောက်သွားတာလူကြား သူကြား ရှိတာဘန်းစကားဆိုတာနားလည်မှုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ယူတာဒီလောက်ဆို ကဗျာ ဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားပင်လယ်တွေ ဘယ်ကို စီးဆင်းသွားတာသဘောပေါက်ပြီ။ ။ Posted by
အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကဗျာတွေရေးခဲ့တယ်အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကဗျာတွေရေးနေတယ်အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကဗျာတွေ ရေးနေဦးမယ်။ကဗျာရေးခြင်းအလုပ်မှာ ဘုရားသခင် အကူအညီ မလိုပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဗျာ ၁၀၀ နှင့် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခြင်း
မိုးဃ်းဇော်သေတမ်းစာ ကဗျာစာအုပ်မှ ကဗျာများ
ဇေယျာလင်း-ကဗျာ ဘ၀ ရှာတော်ပုံ
Myanmar Book Shops